‘नेप्टे’ मा भिलेन दयाहाङ, रोहितको रोल के ? (प्रोमो) « Ramailo छ
‘नेप्टे’ मा भिलेन दयाहाङ, रोहितको रोल के ? (प्रोमो)
फिल्म ‘नेप्टे’ को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । चैत्र ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको सोमाबार प्रेसमिट गर्दै प्रोमो सार्वजनिक गरिएको हो । रोहित रुम्बाको लगानीमा देबकुमार श्रेष्ठ निर्देशित ‘नेप्टे’ को ट्रेलर हेर्नुस् :
‘नेप्टे’ मा अभिनेता दयाहाङ राई पहिलो पटक खल पात्रको भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । प्रोमोमा दया, रोहित र वुद्धिको द्धन्द्ध देखाइएको छ । नायक तथा निर्माता रोहितकै कथा रहेको नेप्टे मा किरण माइकल घिमिरेको पटकथा तथा संवाद र हरि लामा घलेको छायांकन छ ।